Astaamaha maskaxda: Nidaamka abaal-marinta ayaa kaxeynaya dabeecadeena Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda Nidaamka Abaalmarinta
Si aad u fahamto sababta aan u cunno cuntooyinka dhadhan fiican leh, taabashada jacaylka, rabitaanka galmada, khamriga, heroinka, filimada, shukulaatada, khamaarka, warbaahinta bulshada ama dukaamada online, waxaan u baahanahay inaan ogaano nidaamka abaalmarinta.
The nidaamka abaal-marinta waa mid ka mid ah nidaamyada ugu muhiimsan maskaxda. Waxay dhaqaajisaa dabeecadeena dhanka dareenka raaxada leh sida cuntada, galmada, aalkolada, iwm. Waxayna naga kaxeyneysaa kuwa xanuunka leh (isku dhaca, shaqada guriga, iwm) ee u baahan tamar ama dadaal dheeri ah. Waa halka aan dareemeyno shucuurta oo aan ka shaqeyno shucuurtaas si aan u bilowno ama u joojinno ficilka. Waxay ka kooban tahay koox qaabdhismeedka maskaxda ee xudunta maskaxda. Waxay miisaamaan inay ku celiyaan dabeecad iyo inay caado yeeshaan. Abaal marintu waa kicinta kicisa rabitaanka cuntada si loo beddelo dhaqanka. Abaalmarinta ayaa sida caadiga ah u adeegta sidii xoojiyeyaal. Taasi waa, waxay naga dhigayaan inaan ku celcelinno dabeecadaha aan u aragno (miyir la'aanta) inay ufiican yihiin badbaadinteenna, xitaa marka aysan ahayn. Raaxo waa abaal marin ka fiican ama kicinta marka loo eego xanuunka dhiirigelinta dhaqanka. Karootada ayaa ka fiican ul iwm.
Xaruntii nidaamka abaal-marintu waa qallooca. Waa gobolka maskaxda ee soo saara dareemo abaalmarin ama raaxo. Hawl ahaan, istiraatiijiyaddu waxay isku dubarido dhinacyada kala duwan ee fekerka ee naga caawiya inaan go'aan gaarno. Kuwaas waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa iyo qorshe hawleedka, dhiirigelinta, xoojinta, iyo aragtida abaalmarinta. Waa halka ay maskaxdu miisaamayso qiimaha kicinta nanosecond, iyadoo u dirta 'u tag' ama calaamadaha 'ka fogow'. Qeybtaan maskaxda ka mid ah waxay isbaddelaysaa sida muuqata iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecadaha balwada leh ama cilladaha mukhaadaraadka. Caadooyinka noqday ruts qoto dheer waa nooc ka mid ah barashada 'cudurada', taas oo ka baxsan barashada kantaroolka.
Tani waa hadal fara badan oo TED ah oo ku saabsan mawduuca Tilmaamaha Diidmada.
Waa maxay doorka dopamine? Dopamine waa neurokimiko sababa firfircoonida maskaxda. Waa waxa nidaamka abaalmarinta ku shaqeeya. Waxay leedahay hawlo kala duwan. Dopamine waa 'go-get-it' neurochemical oo nagu kiciya kicinta ama abaalmarinta iyo dabeecadaha aan ugu baahanahay badbaadada. Tusaalooyinka waa cuntada, galmada, isku xirnaanta, ka fogaanshaha xanuunka iwm. Sidoo kale waa astaan ​​naga dhigeysa inaan dhaqaaqno. Tusaale ahaan, dadka qaba cudurka Parkinson ma baaraan dopamine ku filan. Tani waxay muujineysaa inay yihiin dhaqdhaqaaqyo jilicsan. Soo noqnoqoshada dopamine ee 'xoojiya' dariiqyada neerfaha si ay nooga dhigto inaan dooneyno inaan ku celino dabeecad. Waa qodob muhiim u ah sida aan wax u baranno.
Si aad ah u taxaddar badan ayuu maskaxda ugu jiraa. Aragtida weyn ee ku saabsan doorka dopamine waa dhiirigelinta-salience aragti. Waxay ku saabsan tahay rabitaan, ma jecla. Dareenka raaxada laftiisu wuxuu ka yimaadaa opioids-ka dabiiciga ah ee maskaxda oo soo saara dareen farxadeed ama sare. Dopamine iyo opioids way wada shaqeeyaan. Dadka qaba shisoofrani waxay u muuqdaan inay soo saarid saaid ah oo dopamine ah waxayna taasi u horseedi kartaa duufaanno maskaxeed iyo shucuur xad dhaaf ah. Ka fikir Goldilocks. Isu dheellitirka Cunista cuntada, aalkolada, daroogada, galmada iwm waxay xoojineysaa wadiiqooyinkaas waxayna u horseedi kartaa qabatinka qaar.
Dopamine iyo raaxeysi
Qadarka dopamine ee sii daaya maskaxda kahor dabeecadda ayaa u dhiganta suurtogalnimada suurtagalnimada inay siiso raaxaysi. Haddii aan ku raaxeysanayno walax ama waxqabadyo, xusuusta waxaa loola jeedaa waxaan rajeyneynaa inay mar kale farxad noqon doonto. Haddii kicinta ay jebiso rajadayada - waa wax aad u raaxaysan ama aan fiicneyn - waxaan soo saari doonaa dopamin badan ama yar marka loo eego marka xigta aan la kulanno kicinta. Maandooriyayaashu waxay afduubaan nidaamka abaal-marinta, waxayna bilaabaan heerarka sare ee dopamine iyo opioids marka hore. Waqti ka dib maskaxdu waxay u isticmaashaa kicinta, sidaas darteed waxay u baahan tahay in badan oo dopamine ah si ay u hesho sare. Isticmaalka mukhadaraadka, isticmaalku wuxuu u baahan yahay wax badan oo isku mid ah, lakin lakabkuna wuxuu noqonayaa mid kiciya, maskaxdu waxay ubaahan tahay mid cusub, kala duwan oo badan oo naxdin leh ama la yaab leh si loo helo sareeya.
Isticmaaluhu had iyo jeer wuxuu ceyrsanayaa xusuusta iyo waayo-aragnimadii ugu horreysay ee euphoric, laakiin badiyaa wuxuu ku dhammaadaa niyadjab. Ma heli karo… qanacsanaan. Isticmaalaha sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu, waqti kadib, 'u baahdo' jilicsanaanta ama aalkolada ama sigaarka, si uu u sii ahaado madaxa xanuunka ay keento dopamine-ka hooseeya iyo calaamadaha ka bixitaanka walaaca leh Sidaa awgeed wareegga xun ee ku tiirsanaanta. Qofka isticmaala maandooriyaha ama ku tiirsanaanta akhlaaqda, 'ku dhiirrigelinta' isticmaalka, oo ay keento isbeddelada heerarka dopamine, waxay dareemi kartaa inay u baahan tahay nolol ama nolol badbaado waxayna u horseedi kartaa go'aan qaadasho aad u liidata si loo joojiyo xanuunka.
Ilaha ugu weyn ee Dopamine
Ilaha ugu weyn ee dopamine ee aaggan maskaxda ah (striatum) waxaa laga soo saaray aagga marinka mareenka (VTA). Kadib waxay u socotaa nucleus accumbens (NAcc), xarunta abaalmarinta, iyada oo laga jawaabayo aragtida / calaamadaha / rajada abaalmarinta, oo lagu xareeyo kicinta diyaar u ah waxqabadka. Tallaabada xigta - dhaqdhaqaaqa / dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, oo ay ku shaqeyneyso calaamadda kicinta ee 'go it it,' ama calaamadda xannibaadda, sida 'joojinta', ayaa lagu go'aamin doonaa astaamaha kiliyaha hore marka ay farsameeyaan macluumaadka. Inta badan dopamine ee ku jira xarunta abaalmarinta, ayaa inbadan oo kicinta ah waxaa loo dareemaa abaalmarin ahaan. Dadka qaba xakameyn la'aanta habdhaqanka, ama balwadaha, waxay soo saaraan calaamad aad u daciif ah oo ka socota koontada hore si loo xakameeyo rabitaanka ama ficilka degdegga ah.
<< Neurochemicals Maska Qaangaarka >>